“မင်းသားကြီး ဇာတ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » “မင်းသားကြီး ဇာတ်”	9
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 11, 2015 in Poetry |9comments
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရွာထဲဝင်မရတဲ့နေရာ ရောက်တာကြာတော့ မ၀င်ဖြစ်
Ma Ma says: ခုရက်ထဲ အောင်မိုးသူက စနက်ရှော့ လက်ဆော့တွေ တင်လို့ ကိုပေါက်ကိုတောင် သတိရမိသေး။
အစ အဆုံး မင်းသားကြီးသာ ရှိ ဆိုတော့……
တကောင်ထဲ၊ ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့ ဆိုပါတော့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ဒါလဲပွဲကစည်နေတာပါပဲလေ
မြစပဲရိုး says: ထင်လား ကပေါက်ကြီး ရဲ့။
. အောက်ကနေ “အမိန့်တော်မြတ်ပါဖျား” အော်ပေးနေတဲ့ မှူးကြီးမတ်ရာ တွေ အပုံကြီး ဟာကို။ :-)))
ရာမည says: ကျန်းခန့်သာလို့ မာပါစ ဟီဟိ
အောင် မိုးသူ says: ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်သာ မင်းသားလေ… ဒါပဲ။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်ကွယ်မှာ ပုန်းနေတဲ့ အားနဲ့ လက်ရှိ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင်ရှေ့မှာရပ်တည်နေတဲ့အား
Alinsett @ Maung Thura says: အယ်… တို့ ဂဇက်ရွာရဲ့ မင်းသားကြီးတစ်ယောက်… ဘွားခနဲ ပြန်ရောက်လာတာကိုး….
ကျိုဇိုပါတယ် လေးပေါက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မင်းသားမဟုတ်ပါဘူး အလင်းဆက်ရေ
ကိုပေါက်က ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သာမန်လူ ကိုပေါက်ပါဘဲ